YANXA (HK) INTERNATIONAL ụlọ ọrụ CO., LTD. (nke a na-akpọ YANXA) bụ otu n'ime ndị na-ebuwanye ibu na ngalaba nke ọpụrụiche pụrụ iche na kemịkalụ pyrotechnic na China. ụlọ ọrụ pyrotechnic na ịkekọrịta ozi ụlọ ọrụ na ndị ọkachamara dị mkpa.
2,4-Dinitrotoluene, Ebe Ndozi Elu
Atomized Magnesium ntụ ntụ
Atomized Gburugburu Aluminium Magnesium Alloy Powder
Amonia a na-akpochapu
Super Ọma Guanidine nitrate
Anyị Factory toro n'ime a Premier ISO9001: 2008 Gbaara emeputa nke High quality, eri-irè na ngwaahịa.
Ngwa eji ihe eji eme ihe na teknụzụ Ngwa Ngwa Ngwa Mbupụ
1. Otu akwụkwọ nkwekọrịta ma ọ bụ nkwekọrịta; 2. Nkọwa teknụzụ nke ihe eji eme ihe na teknụzụ; 3. Akwụkwọ njirimara ikpeazụ na akwụkwọ eji eme ihe (gụnyere nsụgharị Chinese), Dịka ihe achọrọ nke Ministry of Commerce, ụfọdụ mba kwesịrị ịnye asambodo abụọ. Ọ bụrụ na ...
N'iji ntụ ntụ magnesium ọdịnala (igwe igwe, ala) atomized magnesium ntụ ntụ nke Tangshan Weihao magnesium ntụ ntụ mepụtara, Ltd nwere njirimara ndị a: ịdị ọcha dị elu, ọdịnaya dị elu nke magnesium na-arụ ọrụ, ọrụ dị elu, ịdị elu dị elu, nnukwu mmiri dị elu, elu stabili ...
Ojiji nke Ddi Na akwa akwa
Diisocyanate (DDI) bụ dizocyanate pụrụ iche nke aliphatic nwere 36 carbon atom dimer fatty acid. Ihe owuwu ahụ na-enye DDI mgbanwe dị mma na nrapado karịa ndị ọzọ aliphatic isocyanates. DDI nwere akuku nke nsi ojoo, adighi acha odo odo, igbari otutu ihe ndi ozo, mmiri di ala na ...